မန္တလေးမြို့၏ ပထမဦးဆုံး နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ တည်ဆောက်မှု ရာခိုင်နှုန်းပြည်? - Yangon Media Group
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ သိပ္ပံလမ်း ၆၉ လမ်းနှင့် ၇၃ လမ်းကြားရှိမြေဧရိယာ၂ ဒသမ ၃၆ ဧကပေါ်တွင် MIDG ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် New Star Light & CAD ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီက တာဝန်ယူတည်ဆောက်သည့် ပထမဦးဆုံးမန္တလေးကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ (Mandalay Convention Centre) စီမံကိန်းမှာ ရာခိုင်နှုန်း ပြည့်ပြီးစီးပြီဖြစ်သောကြောင့် မကြာမီစတင်ဖွင့်လှစ်သွားနိုင်ရန် ပြင် ဆင်လျက်ရှိကြောင်း မန္တလေးမြို့ တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ သိရသည်။
”နိုင်ငံတကာအဆင့်မီနည်းစနစ်တွေကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုထားပါတယ်။ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း တွေ အားလုံးပြီးစီးသွားပြီးအလှ ဆင်အချောသပ်တဲ့ လုပ်ငန်းတချို့ လောက်ပဲလက်စသတ်ဖို့ လိုအပ်တာကြောင့် ဇွန်(သို့မဟုတ်)ဇူလိုင်လထဲလောက်မှာ ဖွင့်လှစ်ပွဲကျင်းပနိုင်ဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ မြေအောက် ထပ်ကကားရပ်နားတဲ့ နေရာမှာဆိုရင် နောက်ထပ်ကားဘယ်နှစီးရပ်ဖို့ကျန်သေးတယ်ဆိုတာနဲ့ ရပ်နိုင်တဲ့နေရာတွေကို မီးစိမ်းပြပေးတဲ့စနစ်ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။ သန့်စင်ခန်းတွေမှာလည်း အာရုံခံကိရိ ယာတပ်ဆင်ထားတဲ့ လက်ဆေးကန်တွေကို ထည့်ပေးထားပြီးလမ်းမ လျှောက်နိုင်တဲ့သူတွေ အဆင်ပြေ စွာဝင်ရောက်နိုင်မယ့် ဝှီးချဲလ်လမ်း တွေထားရှိပါတယ်။ အာဆီယံအ ဆင့်ဆွေးနွေးပွဲတွေ ခမ်းနားစွာကျင်းပနိုင်အောင် VVIP အခန်းငယ် တွေ ထည့်သွင်းပါဝင်ပါတယ်”ဟု မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ ကော်မတီဝင်ဦး ကျော်ဇောအောင်က ဇွန် ၁ ရက်တွင် ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောကြားသည်။
မန္တလေးကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာသည် သံကူကွန်ကရစ်နှင့် သံပေါင်အမျိုးအစားလေးထပ် အဆောက်အအုံဖြစ်ပြီး အကျယ်အဝန်းအား ဖြင့် ၃၈၆ ပေx ၃ဝ၅ ပေ(စတု ရန်းပေ ၂၂ဝဝဝဝ)ဖြစ်ကြောင်း၊ မြေညီထပ်တွင် လူဦးရေ ၄၅ဝဝ ဆံ့ ခန်းမ၊ ပထမထပ်တွင် လူဦးရေ ၈ဝဝ ဆံ့ထပ်တိုးခန်းမကြီးနှစ်ခု၊ လူဦး ရေ၁၈ဝဆံ့ခန်းမလတ်လေးခုနှင့် လူဦးရေ ၈ဝ ဆံ့အခန်းနှစ်ခုနှင့် အပေါ်ထပ်များတွင် လူဦးရေ ၂ဝဝ ဆံ့ကွန်ဖရင့်ခန်းမနှစ်ခု၊ သီးသန့်အစည်းအဝေးခန်းမငယ်များ၊ ဓာတ် လှေကားလေးစင်းပါဝင်ပြီး လုံခြုံ ရေးကင်မရာများနှင့် နောက်ဆုံး ပေါ် မီးဘေးကြိုတင်ကာကွယ်ရေး စနစ်များနှင့် အရေးပေါ်ထွက်ပေါက်များ၊ မီးသတ်ဆေးဘူးများနှင့် မီးသတ်ပိုက်များကို အထပ်တိုင်းတွင် ထားရှိပေးထားသည်။ မန္တလေးကွန် ဗင်းရှင်းစင်တာကို ပြီးခဲ့သည့် ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်လအတွင်းက အကြိုဖွင့် ပွဲ (Soft Opening) ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဒုတိယ ဝါဆိုလပြည့် ဓမ္မစကြာ အခါတော်နေ့ မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဝန်း ဘုရားစေတီများတွင် ဘုရားဖူးသူမျ??
အင်ဒိုနီးရှား ဆူမားတြားကျွန်းတွင် ထောင်ဖောက်မှုဖြစ်ပွား၊ အကျဉ်းသား ၁ဝဝ ကျော်ထွက်ပြေး လွတ်ေ